Lasa Aiza Daholo ny Olon-tsotra ao Shina Ao Amin’ilay Tantara Mitohy Miady amin’ny Kolikoly Mitondra ny Lohateny hoe ‘Amin’ny Anaran’ny Vahoaka’? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Mey 2017 5:14 GMT
Pikantsarin'ny “Amin'ny Anaran'ny Vahoaka”
Nahatratra 8 isanjato amin'ny fitambaran'ny mpijery TV, taha avo indrindra tao Shina Tanibe tao anatin'ny folo taona, ny tantara foronina ara-politika malaza mitondra ny lohateny hoe “Amin'ny anaran'ny vahoaka”, ary mahazo anaram-bositra ho “House of Cards” [tantara mitohy mandeha amin'ny TV any Etazonia] an'i Shina, ary efa nahatratra 22 miliara ny fitambaran'isan'ny jery azon'ireo fizaran-tantara miisa 55 hatramin'ny nandefasana ny fizarana voalohany tamin'ny 28 Marsa 2017.
Ity andian-tantara ity no nandrava ny fandrarana fandefasana tantara miady amin'ny kolikoly nalefa amin'ny fotoana maha-be mpijery indrindra, fandrarana naharitra folo taona tao Shina sady tantara am-pahitalavitra voalohany mandoko ny lefitry ny mpitariky ny firenena ho olon-dratsy ao aminy.
Ny heverina ho nanintona ny mpijery dia ny seho nandokoana ny adim-pahefana ifanaovan'ireo manampahefana ambony ao amin'ny Antoko Komonista sy ny fiainana miafin'izy ireo. Mpiasam-panjakana iray mameno ny rindrin'efitranony amin'ny vola taratasy. Lehiben'ny polisy any amin'ny faritany miezaka ny mamono ny mpifanandrina aminy ara-politika amin'ny sarintsarina fandonana olona amin'ny fiara sy ny fandosirana avy eo. Ny zanakalahin'ny depiotem-panjakana mangorom-bola avy amin'ny fanohanan'ny olom-pehezin'ny rainy fahiny. Mpitsara iray tratra eo am-pandriana miaraka amin'ny mpivarotena blaondy iray. Ary lehiben'ny fiarovam-paritany iray nanambady miafina ny sipany saingy mbola milaza izy sy ny vadiny voalohany fa mpivady.
Mampahatsiahy ireo kolikoly tena misy amin'ny fiainana ao Shina ireo tantara ireo. Voamarika manokana ny handokoan'ny tantara mitohy ireo fisaratsarahana ao anatin'ny Antoko Komonista Shinoa, toy ny “vondron'ny sekretera” sy ny “vondrona ara-pitsarana politika”, izay manome akony ny tena misy izay notarihan'i Ling Jihua mpanampy ny filoha teo aloha Hu Jintao sy ny tsar Zhou Yongkang, mpisahana ny fiarovana teo aloha.
Maro ireo mpanao tsikera ara-kolontsaina niezaka nanazava ny lazan'ny fampisehoana. Tao amin'ny seminera iray, Shinoa mpanoratra Mei Guoyun nanolotra fandokolokoana nitarika ny fifanakalozan-kevitra.
Sary avy amin'ny tsanganana blaogin'i Mei Guoyun.
Ny soritsoritra dia mampiseho ny endri-tsoratra “vahoaka” na renmin (人民) tafahitsoka ao anatin'ny endri-tsoratra manondro ny “vava” (口). Navoakan'i Mei tao amin'ny seminera izao fanontaniana manaraka izao:
Ny voambolana “vahoaka” dia voatonon'[ny manampahefana mpanolikoly sy mpiady amin'ny kolikoly] hatrany. Fa iza no tena afa-mihetsika “amin'ny anaran'ny vahoaka”?
Wang Meiyun, mpikaroka iray ao amin'ny Oniversite Fudan, nanolotra ny fijeriny tao amin'ny seminera ary nanamarika fa ny “vahoaka” tokoa no tsy hita ao amin'ny tantara mitohy:
Hatramin'ny taona 2004 no efa tsy hita amin'ny fotoana maha-be mpijery amin'ny fahitalavitra intsony ny tantara tsangana miady amin'ny kolikoly, izay nofehezin'ny tantara tsangan'ny tarana-panjakana Qing tamin'izany fotoana izany; Tamin'ny alalan'ny fitanisana tantaram-pirenena ihany no nahafahan'ny mpanoratra sy ny mpanatontosa [tale] maneho ny fijeriny amin'ny zavamisy. Afenina sy atao manjavozavo hatrany ny hafatra ary tena sarotra ho an'ny olon-tsotra ny mahita ny fanoharana nafenina. Lasa fantsona famoahan'ny olona ny fahadisoam-panantenany sy ny fahatezerany manoloana ny zavamisy ny “Amin'ny anaran'ny vahoaka”. Mailaka tokoa ry zareo hijery ireo tantara tsangana miady amin'ny kolikoly. mandritra izany fotoana izany dia miara-milahatra amin'ny fifantohana ara-politikan'ny governemanta ny lohahevitra, izany hoe natao halaza. Na dia tsotra loatra aza ny fizotry ny tantara, dia voaafin'ny lohahevitra ny lesoka maro ao anatiny.
Ny singa miharihary ao amin'ny tantara mitohy dia ny tsy fahitantsika olon-tsotra ao anatiny. Sangany ao amin'ny governemanta na any amin'ny fihariana avokoa ireo mpandray anjara rehetra, na amin'ny lafiny tsara na amin'ny lafiny ratsy raha tsy hita ao ny olon-tsotra. […] Ny tsy fisian'ny vahoaka ve no eso miafina ao anatin'ny nanoratana ny tantara?
Ivelan'i Shina kosa dia mandalina bebe kokoa any amin'ireo manampahefana voakolikoly na miady amin'ny kolikoly soritsoritana ao amin'ny tantara mitohy ireo mpanao tsikera tantara tsangana. Fanehoan-kevitr'olona tsy nitonona anarana navoakan'ny Letscorp, blaogy iray mampifandray ny votoaty eo amin'i Tanibe sy ireo faritra shinoa ampitan-dranomasina:
Ireo tondroina ho olon-dratsy ao amin'ny tantara tsangana, ry Zhao Dehan, ry Qi Tongwei, ary ry Gao Xiaoqin, izy rehetra ireo dia samy kely hery avokoa tamin'ny voalohany ary nikarataka mafy hahatonga azy ireo hanan-kohariana sy matanjaka. Ifampizarana amin'ny olon-tsotra ny hery manetsika azy ireo hifehy ny lalam-piainany [lahatra]. Etsy ankilan'izany, ny hery manetsika ireo [hafa] dia ny hisoroka ny fidarabohan'ny antoko sy ny firenena ao anatin'ny petra-kevitra hoe “avy amin'ny vahoaka, ho amin'ny vahoaka” io. Lavitra loatra amin'ny zava-mihatra amin'ny vahoaka izany hery manetsika izany. Ny sangany ihany no mety hijaly amin'ny fiafaran'ny antoko, fa tsy ny vahoaka.
Avy amin'ny vahoaka ireo manampahefana voakolikoly, raha ambonin'ny vahoaka kosa ireo miady amin'ny kolikoly [grefy]. Izany no zavamisy voapika sary ao amin'ny “Amin'ny anaran'ny vahoaka” ary izay no mametraka ny tantara tsangana ho tantara an'eso.
Mora ho an'ny zanaky ny manampahefana ao amin'ny governemanta sy ny antoko ny mahazo fanabeazana tsara, mahita asa tsara ary misondrotra ao Shina, raha mila mitolona mafy kosa ny zana-bahoaka vao afa-mandia any amin'ny tanandehibe miaina trano lafo dia lafo. manana lonilony ny mpijery sasantsasany raha mahita ao amin'ny tantara tsangana fa ireo miady amin'ny elanelana azon'ireo efa mahazo tombondahiny no soritsoritana ho voakolikoly.
Ireto ambany ireto ny fanehoan-kevitra mivezivezy any amin'ny sehatra media sosialy shinoa:
Olona iray avy any amin'ny fianakaviana sahirana, any ambanivohitra, nahazo diplaoma [iray amin'ireo manampahefana voakolikoly ao amin'ny seho na tantara tsangana] novonoin'ny taranaka faharoan'ny manampahefanan'ny governemanta sy mpitarika ny revolisiona [ireo mpitarika miady amin'ny grefy na kolikoly].
Ilay “Amin'ny anaran'ny vahoaka” aloha dia tokony nantsoina hoe “Rafitra ifandovan'ny Menakely”, raha mahita ilay tantara tsangana maneho ny zanaky ny tantsaha ho mora lasa manampahefana voakolikoly sy olon-dratsy raha asandratra kosa matetika sy lazaina ho olona tsara [taiza] ireo zanaky ny manampahefana.
Maro ireo mpiserasera no manondro fa ny fahadisoana goavana ao amin'ny tantara mitohy dia ny afmetrahana fa ireo manampahefana rehetra dia manana ankohonana na fifandraisana manokana, izay saika ohatra avy amin'ny rafitra ifandovana mihitsy izany. Na dia eo aza ny lohateny, dia manaisotra ny vahoaka ilay tantara tsangana ary ahitana ireo manampahefana ambony manapa-kevitra ho an'ny vahoaka, fa tsy misy ilay niainga avy amin'ny vahoaka akory!